Goobaha cod-bixinta ee dalka DR Congo oo maanta furmay, iyadoo cabsi xooggan laga qabo qala-laaso ka dhasha goobaha cod-bixinta dalkaasi Congo. – Radio Daljir
Goobaha cod-bixinta ee dalka DR Congo oo maanta furmay, iyadoo cabsi xooggan laga qabo qala-laaso ka dhasha goobaha cod-bixinta dalkaasi Congo.
Congo, Nov, 28 – Goobaha codbixinta ee doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa baarlamnaka ee dalka Jamhuuriyadda dimuquraaddiga ah ee Congo ayaa furmay maantay oo isniin ah, waxana saraakiisha doorashooyinka ee dalkaasi sheegayaan in diyaar-garawga doorashadu ay aad u sareeyo.
Madaxa guddiga doorashooyinka ee dalka DR Congo ayaa sheegay in goobaha codbixinta la wada diyaariyey , islamarkaana waxkasta ay u socdaan sidii loo qorsheeyey.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay iskudhacyadii sabtidii ee u dhexeeyey taageerayaasha murashaxiinta doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi.
Doorashadan madaxtinimada ee dalka DR Congo ayaa noqonaysa tii kowaad tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii dalkaasi ee socday intii u dhexeysay sanooyinkii 1996dii ilaa 2003dii.
Ururada caalamiga ah ayaa ka hor bilaabashada doorashooyinka DR Congo codsaday deganaansho, iyo is-xakamayn , waxana ay ugu baaqeen murashaxiinta in ay aqbalaan natiijada doorashada kasoo baxda.
Saraakiisha doorashooyinka ayaa isku dayaya in ay waraaqaha codbixinta gaadhsiiyaan 60,000 ( lixdan kun ) oo xarumood oo codadka laga dhiibanayo, waxana laga yaabaa in goobaha codbixintu aanay isku xilli furmin , iyadoo ay sabab u tahay baaxadda dalkaasi oo weyn. Waxaana dalka Dr Congo la sheegay in uu dhigmo laba meelood oo saddex meelood bedka galbeedka qaaradda Europe marka laga hadlayo baaxada uu dalkaasi ku fadhiyo.
Radio Daljir Boosaaso.